🥇 ▷ dhiibitaan cusub ayaa ka muuqda tayada sare ✅
dhiibitaan cusub ayaa ka muuqda tayada sare
Xiaomi waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan sannadihii ugu dambeeyay dad badanina waa adeegsadeyaal horeyba u qalab u helay Qiimaha ugu fiican ee suuqa. Muuqaalka cusub ee la sii daayay ee Mi 9T Pro waa tusaale cad oo muujinaya in Xiaomi ay ku sii socoto firfircooni tartiib tartiib tartiib tartiib ugu socota suuqa. Si kastaba ha noqotee, shirkad Shiineys ah oo ay moodayeen, maxaa sidoo kale aan loogu khiyaameyn taleefannada gacanta?
Imaatinka suuqa marinnada sida “Galaxy Fold” ama ‘Mate X’ iyo daahitaankiisa joogtada ah ee taariikhda furitaanka ayaa dhiirrigeliyay a Xiaomi kaas oo waliba leh qalab dabacsan oo ku jira buugga macluumaadka. Waxaan horey u helnay qaar ka mid ah faahfaahinta ugu wanaagsan ee terminal kaasoo suuqa imaan doona iyadoo leh naqshad cusub, si kastaba ha noqotee, waligeed kuma xanuunsato inaad ku raaxeysatid qalabkan cusub mid ama mid kale ugu badnaan bixi tayo Fiiri!
Xiaomi’s laablaabida taleefanka gacanta sida aadan horey waligaa u arkin
LetsGoDigital waxaa loo tusay adduunka inuu yahay mid ka mid ah bogagga internetka ee sameeya kuwa xawilaad badan adduunka. Munaasabadan waxay go aansadeen inay eegaan qaar ka mid ah aaladaha gacanta ee isku laabma Xiaomi si ay u fuliyaan ajanabiga aan siin karno oo aan ka heli karno fikrad ah sida marinka ugu caansan ee shirkadda weyn ee Aasiya ay noqon doonto.
Dib-u-dhaca joogtada ah ee Galaxy Fold iyo Mate X wuxuu soo saari karaa farqi kalsooni darro dhinaca qaar ka mid ah adeegsadayaasha kuwaasoo dooran kara noocyada kale ee xulashooyinka sida Xiaomi. Waxa intaa ka sii badan, taleefanka gacanta ee isku laabma ayaa calaamad u ah muuqaal u muuqda mid aad uga faa iido badan xarunta Samsung ee dhexgalka laba laablaab ee labada dhinac ee marinka. Markii aan adeegsaneyno moobilkan cabirkiisa oo dhan waxaan u baahanahay inaan labada qaybood geynno banaanka, si aaladda ay ugu dambeyntii u noqoto kiniin leh shaashadda hore ee aad adeegsan karto.
Dabcan, dhibaatada kaliya ee aan ku aragno qaabeynta ayaa ah in hore waxaa loo arki karaa naxdin iyo nabarro haddii ay dhacdo suuro gal. In kasta oo daadinta qaarkood ay hubiyaan inaan sidoo kale ku laaban karno aaladda gudaha si aan uga fogaano nooc kasta oo xoq ah. Haddii aad fiiriso gadaal, waxaa jira kamarad saddex-gees ah oo ku dhex taal bartamaha oo aad ugu eg midda aan ku aragnay moodallada cusub ee Redmi. Waqtigan xaadirka ah, tani waa waxa kaliya oo lagu yaqaanay mobilka isku laabma ee Xiaomi. Waxaan sugi doonnaa astaanta si aan u soo bandhigno xogta rasmiga ah ee ugu horreysa si loo xaqiijiyo dhammaan faahfaahinta.
Xigasho | LetsGoDigital